Saturday December 01, 2018 - 09:01:45 in Wararka by Liibaan Jeexoow
George Bush madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa ku dhintay magaalada Houston ee gobolka Texas sida uu xaqiijiyay George W. Bush oo ah wiilkiisa, Wargeyska Washingtonpost ayaa isna xaqiijiyay geerida Bush-ka aabaha ah.
"Annagoo murugeysan ayaan iclaaminaynaa geerida Aabeheen George Bush oo runtii ahaa aabe wanaagsan" sidaas waxaa yiri Bush-ka wiilka ah.
George Bush ayaa dalka Mareykanka soo maamulayay intii u dhaxaysay sanadihii 1989 illaa 1993, sanadihii uu xilka hayay ayuu caalamka islaamka ka geystay xasuuq baaxad leh wuxuuna hoggaaminayay duullaankii ciidamada UNISOM ay kusoo qaadeen Soomaaliya billaawgii sagaashameeyadii halkaas oo ay shacab ku gummaadeen.
Sidoo kale George Bush ayaa mas'uul ka ahaa duullaankii ciidamada isbaheysiga reergalbeedka ay ku qaadeen wadanka Ciraaq wuxuuna gaajeysiin ku dilay malaayiin Carruur reer Ciraaq ah kadib markii cunaqabateyn dhan walba ah lagusoo rogay Ciraaq sanaddii 1991.
Bishii Febaraayo ee sanaddan 2018 ayaa geeriyootay Xaaska Bush waxayna muddo sanada ah ku xanuunsanayeen xarun lagu xanaaneeyo dadka waayeellada ah oo kutaal magaalada Houston ee dalka Mareykanka.
Xaaladda caasimadda ee George W. Bush-ka wiilka ah ayaan iyana wanaagsaneyn waxaana la sheegay in uu kujiro isbitaal isagoo bukaan socod ah.
Sawirro: Tobanaan kun Muslimiin ah oo Salaaddii Ciidda ku tukaday mid kamida garoomada ugu waaweyn dalka Mareykanka.
Video+Warbixin: Kumuu ahaa Madaxweynihii Qur'aan diidka ahaa ee dalka Tunisia.